Pages - Myanmar Wordpress
ဝေါ့ပရက်(စ်)ပေါ်တွင်၊ အထွေထွေဘလော့(ခ်)များ သင်ရေးဆွဲသောအခါ ပို့စ်(တ်)နှင့် ပေ့(ခ်ျ) နှစ်မျိုးလုံးရေးနိုင်ပါသည်။ ထိုအရာသည် ပို့စ်(တ်)ဖြင့် ပို့စ်(တ်)ရေးဆွဲခြင်းဖြစ်သည်။ အစဦးဆုံးပြုပြင်တပ်ဆင်မှုမှ၊ သင့်၏ဘက်ဂရောင်းစာမျက်နှာတွင် အသစ်မှ အဟောင်းသို့ အစီအစဉ်တကျ ပေါ်လာမည်။ ပေ့(ခ်ျ)အတွက် "ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း" နှင့် "ဆက်သွယ်ရန်"ကဲ့သို့သော ခေါင်းစဉ်များအတွက် အသုံးပြုသည်။ ပေ့(ခ်ျ)သည် ပုံမှတ်ဘလော့(ခ်)ထဲတွင် ရောမနေပါ။ အများစုမှာ သင့်အကြောင်း(သို့) သင့်ဝပ်ဆိုဒ်နှင့်ပက်သတ်သည့် အချက်အလက်များကို ယူဆောင်လာရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။ အချိန် အပိုင်းအခြား မကန့်သတ်ထားသော၊ အမြဲတစေ အသုံးချရသော အချက်အလက်များဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ပေ့(ခ်ျ)ကို "ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း" နှင့် "ဆက်သွယ်ရန်"ကဲ့သို့သော အချက်အလက်များထည့်သွင်းရန်အတွက် အသုံးပြုခြင်းမှလွဲ၍ ပေ့(ခ်)၏ အခြားအသုံး ပြုပုံများမှာ အခွင့်အရေးထိန်းချုပ်ခြင်း၊ အချက်အလက်များပွင့်လင်းစွာ ဖော်ပြခြင်း၊ ဥပဒေဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ ကုမ္ပဏီအကြောင်းအရာများနှင့် အသုံးပြုရန် လမ်းညွှန်များတို့ဖြစ်သည်။ ပေ့(ခ်ျ)အများစုသည် ပို့စ်(တ်)နှင့် အလားတူပင်ဖြစ်သည်။ နှစ်ခုလုံးသည် ခေါင်းစဉ်နှင့် အကြောင်းအရာများထည့်သွင်းခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် နှစ်ခု လုံးကို သင့်၏ဝပ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စေအောင် ပေါ်လွင်လာစေရန်အတွက် ပုံသဏ္ဍာန်များကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောင့်ပေးရန် ဝေါ့ပရက်(စ်) ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ခြားနားမှုများလည်းရှိပါသည်။
ပို့စ်(တ်)ထက်အချိန်နည်းပါးစွာရှိသော အကြောင်းအရာများအတွက် ပေ့(ခ်ျ)ကို ထားရှိသည်။
ပေ့(ခ်ျ)ကို စာမျက်နှာပေါင်းများစွာနှင့် စာမျက်နှာခွဲပေါင်းများစွာတို့ဖြင့် ထပ်မံခွဲခြားထားနိုင်ပါသည်။
ပေ့(ခ်ျ)ကို ကွဲပြားခြားနားသော စာမျက်နှာပုံစံများဖြင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ပုံစံဖိုင်များ၊ ထပ်(က်)ပုံစံများ၊ နှင့် PHP ကုဒ်များတို့ပါဝင်သည်။
ပေ့(ခ်ျ)တွင် ထပ်ခါဖြစ်နေသော ဖော်ပြမှုများကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲစေရန် ထပ်(ပ်)များ ပါရှိသည်။ ထို့နောက် အခြားအရာများနှင့် များစွာထပ်ခါဖြစ်နေသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲစေမှုပုံသဏ္ဍာန်များကို အသုံးပြုသောအခါတွင် အဆင်သင့် သုံးရန်ရှိသည်။
အရေးကြီးသည်မှာ ပေ့(ခ်ျ)သည် ဘလော့(ခ်)မဟုတ်သော အကြောင်းအရာများအတွက် အသုံးပြုသည်။ ဝေါ့ပရက်(စ်)တပ်ဆင်ရာတွင် ပို့စ်(တ်)အားလုံး (သို့) ပို့စ်(တ်)အများစုတို့ကို လဲလှယ်ခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဘလော့(ခ်)ပုံစံမဟုတ်သည့် သာမန်ဝပ်ဆိုဒ်ပုံသဏ္ဍာန်တွင် တည်ဆောက်နိုင်သည်။
Pages are not included in your site's feed. Pages and Posts may attract attention in different ways from humans or search engines. Pages (oraspecific post) can be set asastatic front page if desired withaseparate Page set for the latest blog posts, typically named "blog."
File:Pages-AddNew-2.9.2.png Pages > Add NewTo createanew Page, log in to your WordPress installation with sufficient admin privileges to create new articles. Select the Administration > Pages > Add New option to begin writinganew Page.
In the right menu, click the "Page Parent" drop-down menu. The drop-down menu containsalist of all the Pages already created for your site. Select the appropriate parent Page from the drop-down menu to make the current Pageachild Page.
Click Publish when ready. When your Pages are listed, the Child Page will be nested under the Parent Page. The Permalinks of your Pages will also reflect this Page hierarchy. In the above example, the Permalink for the Cameroon Page would be:
Almost everything in WordPress is generated dynamically, including Pages. Everything published in WordPress (Posts, Pages, Comments, Blogrolls, Categories, etc...) is stored in the MySQL database. When the site is accessed, the database information is used by your WordPress Templates from your current Theme to generate the web page being requested. An example ofastatic page might be an HTML document (without any PHP code). The problem with purely static pages is that they are difficult to maintain. Changes you make to your WordPress settings, Themes and Templates will not be propagated to pages coded only in HTML. The Page feature of WordPress was developed to alleviate this problem. By using Pages, you no longer have to update your static pages every time you change the style of your site. If written properly, your dynamic Pages will update along with the rest of your blog.
Retrieved from "http://myanmarwp.com/index.php?title=Pages&oldid=162"	Categories: Pages with broken file linksGetting StartedDesign and LayoutTemplates	Navigation menu
This page was last modified on 19 June 2014, at 12:11.